China Camping Lantern Rechargeable for Emergency Manufacture uye Factory | Kennede
Rechargeable Battery:Ichi chiedza chekukurumidzira chakavakirwa-mukati lithium bhatiri ine hupenyu hunosvika maawa makumi mashanu. Inogona kubhadharwa zvizere mumaawa gumi, uye inogona kushanda nguva dzose kwemaawa makumi maviri kunze. Iwe unogona zvakare kuchaja nharembozha yako mune emergency.
Chimurenga pakuchaja:Yedu yemwenje tochi inosiya iyo yekutanga kuchaja modhi, Uchishandisa iyo 110V/220V kana kana USB yekuchaja, nguva yekuchaja inopfupikiswa kubva pamaawa gumi kusvika kumaawa matanhatu. Inopindirana nenzira dzakasiyana dzekuchaja, unogona kuchaja iyi matochi emagetsi epamusoro kumba kana mumotokari yako (adapta yekuchaja haina kubatanidzwa).
CHIEDZA CHINE SIMBA KWAUNONYANYA KUCHIDA: Ultra-bright high power LED chiedza .tine servial models vane maonero akasiyana ekugadzirisa, unogona kusarudza iyo yaunoda.
Zviri Nyore Kutakura. Iyo yakareba-inogadziriswa tambo yefudzi inopihwa pamwe chete nehombe yakagadzika mubato, iri nyore kutakura kana uchiita basa rekunze rehusiku. Zvine huremu kupfuura mhando imwechete yemarambi.
Yakakodzera Mamiriro Ekunze Ese: Yakagadzirwa nezvinhu zvitsva, IPX4 isina mvura. Yakanakira kumisasa, kukwira makomo, kushandisa pamba, nezvimwe
ZVINOKOSHA*Gore Rimwechete Warranty :Tine chivimbo chekuti uchada KENNEDE Spotlight tochi yatinopa mari yekudzoserwa uye vatengi sevhisi guaranty neRimwe gore waranti. Kana iwe ukagamuchira chigadzirwa chakaremara, taura nesu uye isu tichakurumidza kuigadzirisa.
Rechargeable 7W spotlight
Bhatiri: 3.7V 4800mAh rechargeable lithium bhatiri
Tochi: 7W mwenje we LED + 15W mwenje wepadivi
Cable kana plug: 5V Micro USB Charge
Kurongedza: 1 pc / bhokisi, 16 pcs / katoni
Saizi yekatoni: 56.2x51.1x29.2 cm
Rechargeable 5W spotlight
Bhatiri: 3.7V 2400mAh rechargeable lithium bhatiri
Tochi: 5W mwenje we LED
Cable kana plug: 4.2V DC adapter charge
Rechargeable 10W spotlight
Bhatiri: 3.7V 9600mAh rechargeable lithium bhatiri
Tochi: 10W mwenje we LED
Kurongedza: 1 pc / bhokisi, 12 pcs / katoni
Saizi yekatoni: 50x42x37 cm
Kurongedza: 1 pc / bhokisi, 20 pcs / katoni
Saizi yekatoni: 57x41.5x31.6 cm
Bhatiri: 4V 4000mAh rechargeable lead-acid bhatiri
Cable kana plug: AC simba tambo yekuchaja
Saizi yekatoni: 69.5x49.5x29 cm
Solar recharge 3W spotlight ine camping lantern
Bhatiri: 2x 4V 900mAh rechargeable Lead-asidhi mabhatiri
Tochi: 3W mwenje we LED
Mwenje we LED: 6W LED musasa mwenje
Solar charge: Iine solar panel yekuchajisa
Cable kana plug: AC simba tambo yekuchaja, 12V DC socket charge
Saizi yekatoni: 66.9x52x25.4 cm
Zvakapfuura: Kutonhorera-Kubata Stainless Simbi Yemagetsi Kettle
Zvinotevera: KENNEDE 360 LED Camping Lantern yekushandisa Kunze